Alle ha u naxariistee, Nabadoon Xuseen Cali Dude oo lagu aasay Galkacyo. – Radio Daljir
Alle ha u naxariistee, Nabadoon Xuseen Cali Dude oo lagu aasay Galkacyo.
Galkacyo, Mar 21 – Alle ha u naxariistee, waxaa maanta lagu aasay magaalada Gaalkacyo Nabadoon Xuseen Cali Dude oo xalay salaada cishe kadib dablay hubaysani ay ku dileen meel aan ka fogayn masjidka Ramadaan ee magaalada Gaalkacyo.
Marxuumka ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen laba nin oo hubaysan kadib markii uu ka soo baxay salaada cishaha, uuna ku sii jeeday gurigiisa.
Aaska marxuum Xuseen Cali Dude ayaa waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawlada Puntland, xubno ka socday maamulka Gobalka iyo kan Galkacyo, saraakiisha cidamada iyo xubno farabadan oo ka socday nabadoonada, indheergaradka, iyo qayabaha bulshada ee magaalada Gaalkacyo.
Marxuum Xuseen Cali Dude waxuu uu ku dhashay degmada Gallaadi, wuxuuna ka tagay laba xaas iyo caruurtood oo ku kala sugan dalka iyo dibadiisa.
Alle ha u naxariistee, Nabadoon Xuseen Cali Dude wuxuu warbarashadiisii dugsiyada H/Dhexe ku dhamaystay gobalka Mudug, sida uu noo xaqiijiyay Yusuf C/raxmaan Dulcad oo ka mid ahaa asxaabta ay aadka isugu dhawaayeen Marxuumkan, wuxuuna mudo farabadan ka shaqaynayay arrinta Nabadoonnimada; wuxuuna si gaar ah uga mid ahaa ganacsatada Gaalkacyo.
Inkastoo ay wali socadaan hawlgalada la xiriira baaritaanka dadkii falkan ka dambeeyay ayaan hadana aanay cadayn waxa uu Nabadoonku eersaday, mana jiraan dhinaca ciidamadu cid ay wali u soo qabteen dilka Marxuumkan.
Dilka Nabadoonku wuxuu imaanayaa xilli magaaladan Gaalkacyo ay wali ka taagan yihiin dilalka qorshayn ee lagu ugaarsanayo indheergaradka, biri-magaydhada, iyo waxgaradka bulshada udub-dhexaadka u ah.